‘जाहेरी नपरे महिलाविरूद्ध महराले अपमानको मुद्दा हाल्न सक्छन्’ - Bibechana Bibechana
‘जाहेरी नपरे महिलाविरूद्ध महराले अपमानको मुद्दा हाल्न सक्छन्’
१५ आश्विन २०७६ ०६:५२ ||
सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीले यौन दुराचारको आरोप लागएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पीडित महिलाले सोमबार सञ्चार माध्यममार्फत् घटना सार्वजनिक गरे पनि प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छैनन्।
बलात्कार अभियोग लगाइएको हुँदा यस्तो मुद्दामा उनको शारीरिक परीक्षणको समेत ठूलो महत्व रहन्छ। तर उजुरी नदिएका कारण उनको शारीरिक परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। ती महिलाले जाहेरी दिइनन् भने यो प्रकरणको कानुनी बाटो के हो? कसरी अघि बढ्नसक्छ कानुनी कारवाही? नेपालखबरले पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासँग गरेको संक्षिप्त संवादः
बलात्कार प्रयास भनिएको यो प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीमा उजुरी परेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ?
जबजरजस्ती करणीको विषय सामाजविरुद्धको अपराध हो। अपराधको निक्र्यौल र सजायका लागि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलै पीडितले उजुरी दिने र परीक्षण गराउने काममा प्रहरीलाई सघाउनु पर्छ। पीडितले घटनालाई बाहिर ल्याएपछि सामाजविरुद्धको अपराध भएको कारण प्रहरीले त्यही रिपोर्टअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। प्रहरीले जबरजस्ती स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा जापानसहित विभिन्न देशमा विवाद छ। पीडितले उजुरी दिइन् भने सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ।
महिलाले उजुरी दिइनन् भने कानुनी कारवाहीको बाटो के रहन्छ?
घटना बाहिर ल्याउने तर उजुरी नदिने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन समेत अस्वीकार गरिन् भने पीडिक भनिएका कृष्णबहादुर महराले अपमानको मुद्दा हाल्न सक्छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अस्वीकार गर्ने हो भने प्रहरीले पनि उनीमाथि अब्स्ट्रागल अफ जस्टिस (न्यायमा अवरोध पुर्‍याएको) अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्छ। यसमा दोषी ठहर भए उनलाई ५ वा ६ वर्षको जेल सजाय हुनसक्छ। नयाँ कानुनले झुटो साक्षी वा साक्षी बस्न नमान्नेहरुलाई समेत न्याय दिलाउन अवरोध गरेको कसुरमा जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
उजुरी परेको अवस्थामा भने पक्राउ गरेर नै कारवाही चलाउने हो?
उजुरी पर्ने बित्तिकै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। प्रहरीले पक्राउ नगरिकनै अनुसन्धान गर्न सक्छ, पक्राउ गर्न पनि सक्छ। अदालतले धरौटी लिएर अनुसन्धान गर्न समय पनि दिनसक्छ। पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु भनेको प्रमाण नष्ट गर्लान् कि भनेर हो।
भारतमा हुने चट्याङको जोखिम नेपालमा पनि
चट्याङले मानवीय क्षति बढेको छ । भारतमा बिहीवार एकै दिन १०७ जनाले चट्याङ लागेर
लक डाउन खुले पनि तत्काल विद्यालय खुल्दैनन् : शिक्षा मन्त्री
गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि कोरोना संक्रमणले विश्व आतंकित बनाइरहेको अवस्थामा अहिले नै
बिर्तामोडका औषधि व्यवसायी भन्छन्, ‘जोखिम मोलेर सेवा दिइरहेका छौँ’
कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लक डाउन (निषेधाज्ञा) गरेपछि दुई दिनदेखि झापाका चोक बजार
अफ्ठ्यारो बाटो हिँड्न रुचाउँछन् दुर्गा प्रसाई
झापालाई मेडिकल हव बनाउने अभियानमा अर्बाै रुपैयाँको लगानी जुटाएर दुई ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेज
अब महराको राजीनामा के होला ?
समाचार विश्लेषण । आइतबार साँझ तीनकुनेस्थित रोशनी शाहीको तीनकुनेस्थित डेरामा एउटा घटना घट्छ । जसमा
१४ असोज, काठमाडौं । भूमाफियाले खुलामञ्चको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको सटर भत्काउन डोजर लगाएको पाँच महिना
वन्यजन्तुलाई ‘क्यानोपी ब्रिज’
काठमाडौँ — राजमार्गमा चल्ने सवारीले किचेर वन्यजन्तु मर्नेक्रम बढेपछि बाँके निकुञ्जले पहिलो पटक क्यानोपी ब्रिज